The Nubia Red Magic 3S ga-abịa na 3D gburugburu ụda | Androidsis
Nubia Red Magic 3S ga-abịa na ụda olu 3D
Ebe mara ọkwa na ụbọchị ntọhapụ nke Nubia Uhie Ime Anwansi 3S, nke bụ Septemba 5, ugbu a enyemaka ZTE ekpughere na arụmọrụ a dị elu ga-eme ka ọ bụrụ ọkwa na ndị 3D okwu olu gburugburu, nke bụ otu ihe ịsị na ọ ga-enye ụda gbara gburugburu n'akụkụ niile.
A na-atụ anya ọtụtụ ihe na ama a. Dị ka anyị kwurula, ọ ga-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu, ya mere o doro anya na ga - erite uru Snapdragon 855 Plus nke Qualcomm nwere na nso nso a, chipset kachasị ike nke ụlọ ọrụ America nke amalitere n'etiti ọnwa July ma kwadoo ya n'ọtụtụ smartphones maka egwuregwu dịka Black Shark 2 Pro na Ekwentị Asus ROG 2.
N'oge na-adịbeghị anya Nubia gosipụtara na Red Magic 3S ga-abịa na nkwado maka ụda 3D gburugburu. Ejiri atụmatụ ahụ iji bulie ahụmịhe egwuregwu na ngwaọrụ. Tupu nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ekpughere na smartphone ga-egosipụta ngosipụta nke 90 Hz ume ọhụrụ - dịka ya OnePlus 7 Pro- na nkwado maka 4D vibration, nke ga - enyere aka inweta ahụmịhe egwuregwu ka mma.
A na-atụ anya na ngwaọrụ ahụ ga-ebu batrị nnukwu ikike., nke ga-abụ otu ihe ahụ Red Magic 3, nke bụ 5,000 mAh. Banyere imewe, debe mma dị ka nke ngwaọrụ ahụ e kwuru na mbụ na, iche, anyị na-atụ anya ka ụlọ ọrụ ahụ mejuputa usoro jụrụ oyi.
Cheta nke ahụ el Nubia Red Magic 3 Njirimara nke mbụ ụlọ ọrụ jụrụ oyi nke anaghị eji mmịpụta anụ ahụ eme ya ma emere ya site na nanomaterials. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na onye ofufe ahụ na-agba ọsọ na ntughari 14 kwa nkeji ma na-ere obere ike. O dakọtara na tube ọla kọpa nke mmiri na-eme ka mmiri dị jụụ iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime oyi.
Nubia Z20: Ekwentị ọhụụ ọhụụ ọhụụ
Iji chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara Nubia Red Magic 3S, gụnyere nkọwa ekwentị zuru ezu na ịnye ọnụahịa, yana nkọwa nnweta, anyị ga-echere maka Septemba 5, ụbọchị a ga-ebupụta ya na China.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 3S ga-abịa na ụda olu 3D
Microsoft na-egbochi nrụnye Minecraft na-enwetaghị ikike
Galaxy A90 5G: Nke mbụ nke etiti na 5G bụzi gọọmentị